Samsung Galaxy Note 7 cusub ayaa gubatay. | Waxaan ka socdaa mac
Samsung Galaxy Note 7 cusub ayaa gubatay.
Calaamadda cusub ee sumcadda Kuuriya, Galaxy Note 7, ayaa guuleysanaysa. Xitaa in ka badan shirkadda lafteedu filaysay. Waan ognahay tan sababtoo ah dhawaan Samsung waxay ku dhawaaqday inay kordhin doonto wax soo saarka iyo soosaarka Note cusub 7. Baahida loo qabo taleefankan casriga ah ayaa wali ka sareeya sidii la filaayay.
Maalmo ka hor Galaxy Note 7 ayaa si lama filaan ah dab ugu soo baxay. Sida muuqata dhacdooyinka ayaa dhacay halka Note 7 uu ku xirnaa si loogu buuxiyo batteriga. Waxayna umuuqataa xeedho ay kuxirantahay lacag bixinteeda a ma aha siyaada asalka ah. Furitaanka markale dood aad u khaldan oo ku saabsan waxyaabaha ka kooban astaanta ama kuwa "sumadda cad".
Telefoon casri ah oo heer sare ah sida iPhone 6s ama Note 7 laftiisa ma ahan mid raqiis ah. Uguyaraan waxay kubilaabanayaan qiimo kudhowaad 800 euro. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxay xitaa u muuqan kartaa wax lagu qoslo in la iibsado qalab aan asal ahayn. Taasi waa, haddii aad ku iibsan karto taleefan casri ah qiimahaas, waxaa loo maleynayaa inaad ku bixin karto xeedho asal ah.
Gubashada Note 7 waxaa saarnaa qalab ka dambeeya suuqa
Sidaan ognahay, casriga ayaa keena, sida caadiga ah, xeedho u gaar ah sumadda. Laakiin sidaani waa isticmaalka aan iyaga ka sameyno, taas had iyo jeer waa inaan haysannaa wax kabadan hal xeedho. Tusaale ahaan, mid guriga, taas oo badanaa asalka ah. Kale goobta shaqada si aysan ugu xaniban bartamaha maalinta shaqada. Sidoo kale waa inaad haysataa xeedho gaariga safarka, ama kharashka degdegga ah intaad wadada ku jirto. Iyo dabcan, markay tahay inaan iibsano ugu yaraan seddex xeedho, qiimaha horay ayaa loo tixgeliyey.
Laakiin adduunka kaabayaasha waxaa jira dhowr heer oo tayo leh. Dhamaanteen waan awoodnay inaan aragno sida ay u jaban yihiin, tusaale ahaan, daboolida iyo guryaha ay ku iibiyaan Shiinaha. Oo weliba waxaan awoodnay inaan xaqiijino tayada ama iska caabinta agabkooda, iyo sida yar ee ay noogu dhan yihiin. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda xeedho, laakiin haa waxaa jira shirkado siyaado ah oo aan ku kalsoonaan karno.
Nasiib wanaag cidna kuma dhaawacmin dhacdada kadib. Iyadoo la tixgelinayo inay jiraan carruur yar yar oo maalin walba adeegsada taleefannada casriga ah, tani waa khatar weyn. Laakiin inkasta oo ay tahay inaan tixgelinno tayada agabyada aan isticmaalno. Waxaan sidoo kale dooneynaa inaan siino soo saarayaasha taleefannada laftooda xoogaa dharbaaxo ah curcurka. Adeegsiga "aad u xun" ee aan bixinno taleefannada gacanta, inay awoodaan ku bixida dabka waa inay noqotaa wax aan macquul ahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Samsung Galaxy Note 7 cusub ayaa gubatay.
IPhone 7 iyo dhibaatada soo saarkeeda sababtoo ah qeybaha cusub
Cache waa codsi cusub oo Microsoft ah oo loogu talagalay macruufka iyo Mac-ka kaas oo noo oggolaanaya inaan maamulno qaanadda